ကိုယျ့ကို ခဈြတဲ့အထငျနဲ့ အသအေလဲခဈြခဲ့ကွတာပါ - ONE DAILY MEDIA
မိနျးကလေးတှကေ … ကိုယျ့ကို မခဈြတဲ့သူကိုမှ အသအေလဲ ခဈြနကွေတာမဟုတျဘူး … ကိုယျ့ကို ခဈြတဲ့အထငျနဲ့ အသအေလဲခဈြခဲ့ကွတာပါ …
မခဈြတော့မှနျးသိတဲ့အခါ ဘယျလိုရပျတနျ့ရမယျမှနျးမသိပဲ ဆကျပွီး ခဈြဖို့ကိုပဲ ရငျနာနာနဲ့ ရှေးဖွဈခဲ့ကွတာပါ ….
အခဈြဆိုတာကို … မသိသေးတဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျက ပထမဆုံးအခဈြကို ရူးသှပျတတျကွသလို ပထမဆုံးတဈယောကျကို အသအေလဲ ခဈြတတျကွတယျ … တဈဖကျက ညာနတောလား အပျေါယံလားဆိုတဲ့ အတှေးတှမေတှေးတတျ မတှေးမိခဲ့ကွဘူး … သူက ခဈြတာပဲဆိုပွီး ကိုယျက ပွနျခဈြဖို့ပဲ တှေးခဲ့မိတာလေ ။
ပွီးတော့မှသာ တဈဖကျက တဖွေးဖွေးပွောငျးလဲသှားပွီး ကြှနျမက အရငျကတိုငျး ခဈြမွဲခဈြနမေိတာပါ … ကိုယျ့ကိုမခဈြတဲ့သူကို ခဈြနမေိနခွေငျးက ရူးမိုကျတယျဆိုပမေယျ့ ကိုယျ့ကို ခဈြမယျအထငျနဲ့ခဈြနမေိခွငျးကတော့ အပွဈတော့ မဟုတျဘူးလေ … စကားလေးတဈခုလိုပေါ့ ယောကျြားလေးတဈယောကျက 100%ကနစေခဈြပွီးတော့ မိနျးကလေးတဈယောကျက … 0%ကနေ စပွီးခဈြတတျကွတယျတဲ့ .. မိနျးကလေးက တဖွေးဖွေး ဆကျခဈြပွီး ၁၀၀%ထိရောကျသှားတဲ့အခါ တဈဖကျက ယောကျြားလေးဘကျက ၀%ဖွဈသှားတတျတယျလေ ။ ပွောငျးပွနျအခြိုးကတြာမြိုးပေါ့ ။
ခကျတာက … သူကကိုယျ့အပျေါတဖွေးဖွေးခငျြး မခဈြမှနျးသိလာပွီးတဲ့တိုငျ ကိုယျ့ရဲ့ခဈြတဲ့စိတျကို မရပျတနျ့ပဈနိုငျခဲ့ဘူး မကွငျနာမှနျးသိရငျ လှတျခလြိုကျပေါ့တဲ့ တခြို့တှကေ အကွံပေးကွတယျ မှနျလဲမှနျပါတယျ …မခဈြမှနျးသိနပွေီးပွီပဲ လှတျခလြိုကျဖို့ပဲ သငျ့တာလေ … ဒါပမေယျ့ အဲ့လောကျထိ မလှယျကူခဲ့ဘူး ။ စခဈြကတညျးက သူတဈယောကျတညျးကိုပဲ မွငျပွီး သူ့ရဲ့ကောငျးခွငျးဆိုးခွငျးအရာအားလုံးကို လကျသငျ့ခံပွီး ခဈြခဲ့မိတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျလေ .. လှယျလှယျလေး မပေ့ဈလိုကျဖို့ဆိုတာ … ထငျထားသလောကျ မလှယျကူခဲ့ဘူး …
တခြို့လူတှပွေောကွသလို မိနျးကလေးတှကေ ကိုယျ့ကို မခဈြတဲ့သူကိုမှ ခဈြတယျဆိုတာ တကယျတော့ မမှနျပါဘူး…ခဈြယောငျဆောငျခဲ့တာကို တကယျခဈြတယျထငျပွီး ခဈြခဲ့မိတာပဲရှိတာပါ ။
မိန်းကလေးတွေက … ကိုယ့်ကို မချစ်တဲ့သူကိုမှ အသေအလဲ ချစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး … ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့အထင်နဲ့ အသေအလဲချစ်ခဲ့ကြတာပါ … မချစ်တော့မှန်းသိတဲ့အခါ ဘယ်လိုရပ်တန့်ရမယ်မှန်းမသိပဲ ဆက်ပြီး ချစ်ဖို့ကိုပဲ ရင်နာနာနဲ့ ရွေးဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ ….
အချစ်ဆိုတာကို … မသိသေးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ပထမဆုံးအချစ်ကို ရူးသွပ်တတ်ကြသလို ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကို အသေအလဲ ချစ်တတ်ကြတယ် … တစ်ဖက်က ညာနေတာလား အပေါ်ယံလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေမတွေးတတ် မတွေးမိခဲ့ကြဘူး … သူက ချစ်တာပဲဆိုပြီး ကိုယ်က ပြန်ချစ်ဖို့ပဲ တွေးခဲ့မိတာလေ ။
ပြီးတော့မှသာ တစ်ဖက်က တဖြေးဖြေးပြောင်းလဲသွားပြီး ကျွန်မက အရင်ကတိုင်း ချစ်မြဲချစ်နေမိတာပါ … ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့သူကို ချစ်နေမိနေခြင်းက ရူးမိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ကို ချစ်မယ်အထင်နဲ့ချစ်နေမိခြင်းကတော့ အပြစ်တော့ မဟုတ်ဘူးလေ … စကားလေးတစ်ခုလိုပေါ့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က 100%ကနေစချစ်ပြီးတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က … 0%ကနေ စပြီးချစ်တတ်ကြတယ်တဲ့ .. မိန်းကလေးက တဖြေးဖြေး ဆက်ချစ်ပြီး ၁၀၀%ထိရောက်သွားတဲ့အခါ တစ်ဖက်က ယောက်ျားလေးဘက်က ၀%ဖြစ်သွားတတ်တယ်လေ ။ ပြောင်းပြန်အချိုးကျတာမျိုးပေါ့ ။
ခက်တာက … သူကကိုယ့်အပေါ်တဖြေးဖြေးချင်း မချစ်မှန်းသိလာပြီးတဲ့တိုင် ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကို မရပ်တန့်ပစ်နိုင်ခဲ့ဘူး မကြင်နာမှန်းသိရင် လွှတ်ချလိုက်ပေါ့တဲ့ တချို့တွေက အကြံပေးကြတယ် မှန်လဲမှန်ပါတယ် …မချစ်မှန်းသိနေပြီးပြီပဲ လွှတ်ချလိုက်ဖို့ပဲ သင့်တာလေ … ဒါပေမယ့် အဲ့လောက်ထိ မလွယ်ကူခဲ့ဘူး ။ စချစ်ကတည်းက သူတစ်ယောက်တည်းကိုပဲ မြင်ပြီး သူ့ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအရာအားလုံးကို လက်သင့်ခံပြီး ချစ်ခဲ့မိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်လေ .. လွယ်လွယ်လေး မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ဆိုတာ … ထင်ထားသလောက် မလွယ်ကူခဲ့ဘူး …
တချို့လူတွေပြောကြသလို မိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်ကို မချစ်တဲ့သူကိုမှ ချစ်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ မမှန်ပါဘူး…ချစ်ယောင်ဆောင်ခဲ့တာကို တကယ်ချစ်တယ်ထင်ပြီး ချစ်ခဲ့မိတာပဲရှိတာပါ ။